China Gift Bath & Shower Spa Basket Gift Gift Set သံပုရာရနံ့ရေချိုးဆေးထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | Haida
PREMIUM GIFTING“ ပေးကမ်းခြင်းပုံစံသည်လက်ဆောင်ထက်ပိုမိုသည်။ ” ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလှပဆုံးလက်ဆောင်ထုပ်ပိုးခြင်းတွင်အလှပဆုံးနှင့်ထူးခြားသော spa ကိရိယာများကိုဖန်တီးပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဆောင်ခြင်းတောင်းသည်ဇနီး၊ အမေနှင့်မိန်းကလေးအတွက်နံပါတ်တစ်လက်ဆောင်အကြံဥာဏ်များဖြစ်စေသည်။
လတ်ဆတ်သောသံပုရာရနံ့ - နေ့လည်ခင်းလန်းဆန်းစေသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏သံပုရာရနံ့သည်ချိုသာ။ သာယာသည်။ လတ်ဆတ်သောသံပုရာမွှေးသည်ကြာရှည်ခံပြီးသင်လိုချင်သောအပန်းဖြေအနားယူမှုကိုသေချာစေပါလိမ့်မည်။
SPA ပြည့်စုံသောလက်ဆောင်ပါ ၀ င်သည်
-200ml bubble ရေချိုး
- အလှဆင်ရန်သိုလှောင်ရန်အတွက် - ပုံးတစ်ပုံး။
ကြွယ်ဝသော၊ ခရင်မ်လိမ်းသူများအတွက်လက်များသို့မဟုတ်နူးညံ့ပြီးစိုစွတ်သောရေမြှုပ်တစ်ခုသို့ဂျယ်လ်ပမာဏအနည်းငယ်ကိုအသုံးပြုပါ။ သင်ကွာခြားချက်ကိုသင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်အလောင်းအစား။
ထုတ်ကုန်၏များသောပမာဏကိုပူနွေးသောရေထဲသို့သွန်းလောင်းပါ။ crystals ၏ပျော်ဝင်ကူညီရန်ရေကိုနှိုးဆော်။
မင်းရဲ့ဗုံးကိုရေချိုးလိုက်ပြီး fizzy ကိုအလုပ်ရှုပ်ဖို့စောင့်ပါ။
Loofah Back Scrubber - ဤနောက်ဘက်ခြစ်ရာများမှာနှစ်ဖက်စလုံးပါရှိသည်။ တစ်ခုမှာပျော့ပျောင်းပြီးတစ်ဖက်သည်ဖြိုဖျက်ရန်အတွက်ကောင်းမွန်သောမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။ ပွတ်တိုက်တွင်လက်ကိုင်များရှိပြီးသင်၏အောက်ပိုင်းကိုရောက်ရှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
မျက်လုံးနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ အကယ်၍ ထုတ်ကုန်သည်မျက်လုံးတွင်ရရှိပါကစင်ကြယ်သောပူရေနှင့်ချက်ချင်းဆေးကြောပါ။ အရေပြားယားယံခြင်းများကိုရပ်တန့်စေပါ။ အကယ်၍ ဆိုးရွားသောအခြေအနေများသည်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါက။
FOB ဆိပ်ကမ်း: XIAMEN
ခဲအချိန်: 25-45 ရက်
Carton Meas: 49 * 45 * 26CM
ပုံးတစ်ခုစီအတွက်သတ်မှတ်ချက် - ၆ စုံ
ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း: T / T, L / C
ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသည့်ရက်စွဲ - အမှာစာအတည်ပြုပြီးနောက် 25-45days ။
1.Certificate: FDA၊ BSCI၊ GMPC၊ ISO.22716၊ ​​လက်လီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနည်းပညာနှင့်လက်လီရောင်းချသူများစစ်ဆေးခြင်းစစ်ဆေးခြင်း။
2.Competitive စျေးနှုန်း & အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးနှင့်ဆန်းသစ်ဒီဇိုင်းနှင့်ထူးခြားသောဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ။
3. အထူးသီးသန့်ရေးဆွဲခြင်း & ထူးခြားသောအရသာအမွှေးအကြိုင်။
4.OEM နှင့် ODM ၀ န်ဆောင်မှုများသည် ၀ ယ်ယူသူများအားခေတ်ရေစီးကြောင်းပစ္စည်းအသစ်များတီထွင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မျက်နှာသာပေးသည်။
၅။ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဌာနသည်ကုန်ကြမ်းအားလုံးမှကုန်ချောအထိအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းအတွက်အထူးတာ ၀ န်ရှိသည်။
အာဟာရပါ ၀ င်သောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ရေရှည်အစိုဓာတ်ကိုပျော့ပျောင်းသော၊ ပျော့ပျောင်း။ အပေါ့ပါးဆုံးခံစားမှုအတွက်ခြောက်သွေ့ခြောက်သွေ့သောအသားအရေကိုပင်ပျော့ပျောင်းစေပါသည်။ ဖော်မြူလာတိုင်းသည်လုံးဝသဘာဝကျပြီး၊
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးနှင့်တသမတ်တည်းအရည်အသွေးအတွက်ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်! လှပသောထုပ်ပိုးထားသောပစ္စည်းများ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊ ချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုလက်ဆောင်ပေးရန် (သို့) သင်၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွင်း spa အတွေ့အကြုံကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြုရန်ပင်ဝယ်ပါ။
ရှေ့သို့ Home Spa လက်ဆောင်ခြင်းတောင်း - အမျိုးသမီးများအတွက်ဇိမ်ခံ7Piece Bath & Body Set
ပန်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလုပ်များပန်းပွင့်အမွှေးနံ့သာ F ...
Shea Body Butter - လိမ္မော်ရောင် Shea Butter B ...
အမျိုးသမီးသုံးအမျိုးသမီးများအတွက် Spa Home Relaxation ရနံ့အိတ် ...